Iincwadi ezili-100 ezifanelekileyo zoyilo lweeholide | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uninzi lwethu alunalo ixesha esingathanda ukulifunda. Andazi ngawe, kodwa ndinoluhlu lweencwadi ezisalindileyo ixesha elininzi kwaye ixesha ngalinye olo luhlu lude, ke ndaye ndagqiba kwelokuba ndisebenzise eli holide le-Ista ukuhlangabezana nezinye zeenjongo ezilindileyo. Incwadi inokuba lukhetho olufanelekileyo lokufumana kwakhona ukusuka kwixesha apho uxinzelelo kunye needosi ezinkulu zomsebenzi ziye zalawula ngaphezu kwako konke.
Singafumana ukhetho olululo lweencwadi kumnatha ezibonisa kakhulu kwaye ziyakhuthaza, kunye nezinye ezobuchwephesha. Ukhetho luya kuxhomekeka kwiinjongo zakho, ke namhlanje ndithathe isigqibo sokwabelana nawe ngokhetho olubanzi kwaye hayi ngaphantsi kweekopi ezili-100 ezinikezelwe kwilizwe loyilo lwegraphic, umzekeliso, ukufota, typography kunye noyilo lokuhlela. Phakathi kwezona zihloko zinomdla zibandakanyiwe kolu khetho ndingathanda ukuqaqambisa: Ukuthengisa ubuchule kunye neendlela ezintsha zonxibelelwano (ML Pinar Selva), Uyilo lwamehlo (Joan Costa), Designpedia (Juan Gasca), Uyilo lweAudiovisual (Antoni Colomer )) okanye ungakholelwa kwilizwi (uDavid Crow), kunye nabanye abaninzi abavela kwiDyunivesithi yaseLondon abanobuzaza kwaye bachanekile. Zonke ezi ncwadi ziyafumaneka simahla kwaye zikwifomathi yedijithali ke kucetyiswa kakhulu ukuba ujonge ukuba ucinga ukufumana ulwazi olutsha malunga nomsebenzi wakho kwaye ujonge ixesha lokuphumla kunye nokucamngca ngezi holide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iincwadi ezili-100 zoyilo ezilungele ezi holide
Indlela enobuchule yokutsala umdla ngesi sicelo sentengiso kwivenkile yeencwadi